प्रदेश नं २ सरकारको तीन वर्ष पूरा, के के भयो प्रगती ? - नेपाली खोज
– हिमांशु चौधरी/अजयकुमार साह,
जनकपुरधाम, ४ फागुन: प्रदेश नं २ सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा सरकारले आफ्नो तीन वर्षको कार्यप्रगति विवरण सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको प्रदेश नं २ संसदीय दलका नेता लालबाबु राउतको नेतृत्वमा विसं २०७४ फागुन ३ गते वर्तमान सरकार बनेको थियो । तीन वर्षको अवधिमा सरकारले गरेको कार्यप्रगतिको प्राथमिकतामा सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारविरुद्व गरेको मुद्दा मामिलालाई समेत दर्शाइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणको सवालमा आव २०७६/७७ सम्ममा यस प्रदेशका अतिविपन्न परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रममार्फत दुई हजार १०१ घर निर्माण भएका छन् । प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा सम्झौता भएका चार हजार ६५९ घरमध्ये दुई हजार ५५८ घर अझै निर्माणका क्रममा रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
सप्तरीमा गजेन्द्र नारायणसिंह औद्योगिक करिडोरमा उद्योग सञ्चालनका लागि काम अगाडि बढाउनुका साथै उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई विशेष सहयोग दिने गरेको छ । सीमित स्रोत साधनका बीच ३० वर्षमा हुन नसकेको काम तीन वर्षमा गरिएको प्रदेश २ सरकारको जिकिर छ । (रासस)
वास्तुशास्त्रका अनुसार पैसा कुन-कुन अवस्थामा खसेको शुभ मानिन्छ ? हेर्नुस्…